အရှေ့ဒဂုံ 15 ရပ်ကွက်ရှိ 20 x 60 အကျယ် 1 RC အိမ်နှင့်ခြံ အမြန်ရောင်းမည်။
680 သိန်း MMK
Tenure ပိုင်ဆိုင်မှု: ပါမစ်
မြေကွက်အကျယ်: 20 x 60
မျက်နှာစာအကျယ်: 20 ft
ရောင်းဈေး: 680 သိန်း (ညှိနှိုင်း)
လမ်းကျယ် (၁၄)ပေ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းပီး
20 X 60 ပါမစ်မြေပေါ်တွင် ပေ17 x 50 တစ်ထပ်ခွဲ (RC)ဖြင့် နေထိုင်ရုံ အသင့် ဆောက်လုပ်ထားပြီး
2. ရေချိူးခန်း(၁)ခန်း၊ဘိုထိုင် အိမ်သာ (၁)ခန်း၊
3. ဧည့်ခန်းမှ ထပ်ခိုးလှေခါးအထိ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်ပြီး ရေစိုခံ၊အရောင်မပြယ်ခြင်းနှင့် ခြစ်ရာ မထင်သော Life Time ရ SPC ပါကေးခင်းထားပေးခြင်း၊ မီးဖိုချောင် တစ်ဝိုက်အား ၂ ပေပတ်လည် ကြွေပြားခင်းထားခြင်း။
4. မီးအားမြုင့်စက် (၁၀၀၀၀ Watt) တတ်ဆင်ထားပေးခြင်း၊
5. ဂရင်းနိုက် မီးဖိုခုံ ၂ ခုံ (အိမ်အတွင်း နှင့် နောက်ဖေး ပြတင်းပေါက်ကပ်လျက်)။
6. ပြတင်းပေါက်များတွင် နောက်ဆုံးပေါ် ခြင်လုံဇကာ တတ်ဆင်ထားပေးခြင်း။
7. ထပ်ခိုး တွင် သဘာဝ အလင်းရောင် ရရှိရန် (၂)ပေပတ်လည် အရှေ့အနောက် တွန်းဖွင့် အမိုး ၄ပေါက် ပါရှိခြင်း။ ထပ်ခိုး ဝရန်တာ လက်ရန်းအား Mild Steel ဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။
8. မီးခလုတ် များအား အရည်အသွေးမီ Schneider တံဆိပ် သုံးပေးထားပီး Branded မီးသီး၊မီးဆိုင်းပါရှိခြင်း။
9. ခြံရှေ့ ကော်လံတိုင်၊ တရံတာ အလှမီးများ၊
10. ခေါင်းရင်း ခြေရင်း နှစ်ဖက်ကိုလည်း Security မီးများတပ်ဆင်ထားပေးခြင်း၊
11. အိမ်အနောက် ဖက် ရေစင်ကိုလည်း RC တိုင်ဖြင့် လုပ်ထားပီး ၂၅ နှစ် အာမခံ ထိုင်းနိုင်ငံလုပ် အကောင်းစား ဖိုက်ဘာ ရေတိုင်ကီ သုံးထားပေးပါတယ်။ Premium အိမ်သုတ်ဆေးများကိုလည်း အကောင်းမွန်ဆုံး သုံးထားပေးတာခြင်း….
Online တင်ခဲ့သည့်နေ့ ဇူလိုင် 16, 2021
နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည့်နေ့ အောက်တိုဘာ 7, 2021
အရှေ့ဒဂုံ3ရပ်ကွက်ရှိ 20 x 60 အကျယ်2RC အမြန်ရောင်းမည်။
အရှေ့ဒဂုံ6ရပ်ကွက် 40 x 60 အကျယ် အခန်း7ခန်းပါ အဆောင် အမြန်ရောင်းမည်။
အရှေ့ဒဂုံ6ရပ်ကွက်ရှိ 20 x 60 အကျယ် 1.5 RC အိမ်နှင့်ခြံ အမြန်ရောင်းမည်။
အရှေ့ဒဂုံ တက္ကသိုလ်ရိပ်မွန်အိမ်ယာရှိ 80 x 80 အကျယ်2RC အိမ်နှင့်ခြံ အမြန်ရောင်းမည်။
2,500 သိန်း MMK
အရှေ့ဒဂုံ 11 ရပ်ကွက်ရှိ 40 x 60 အကျယ် ပျဥ်ထောင် အိမ်နှင့်ခြံ အမြန်ရောင်းမည်။
1,400 သိန်း MMK
အရှေ့ဒဂုံ9ရပ်ကွက်ရှိ 20 x 60 အကျယ် 1 RC လုံးချင်းအိမ်နှင့်ခြံ အမြန်ရောင်းမည်။